Laba Qodob Oo Ay Somaliland Iyo D Jabouti Heshiis Kaga Gaadheen Dalgaalkii Labada Cidan Ee Xeebeed | Berberatoday.com
Laba Qodob Oo Ay Somaliland Iyo D Jabouti Heshiis Kaga Gaadheen Dalgaalkii Labada Cidan Ee Xeebeed
Hargeysa(Berberatoday.com)-Dawladaha Somaliland iyo Djibouti ayaa heshiis rasmi ah ka gaadhay dagaalkii dhex maray labada ciidan xeebeed ee Somaliland iyo Djibouti toddobaadkii hore, halkaas oo uu ku geeriyooday mid ka mid ah askarta Somaliland ee ilaalada xeebuhu.
Heshiiskan, oo ka kooban laba qodob, waxa saxaafadda u akhriyay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Cali Maxamed Warancade iyo wasiirka kalluumaysiga, badda iyo xanaanada xoolaha Maxamed Cawaale. Somaliland ayaa qiratay in markabkii kalluumaysi ee laga lahaa dalka Masar ee biyaha Somaliland ka kalluumaysanayay uu ku xad gudbay biyaha dalka Djibouti isagoo kalluun raadsanaya, halka ay Djibouti qiratay in ciidamadeedu ka dhex dagaalameen biyaha Somaliland iyagoo markabkaas baacsanayay. Wasiir Warancade, ayaa sheegay in ciidanka Djibouti ay soo galeen biyaha Somaliland, iyagoo eryanaya markabkaas, waxaanu sheegay inay Djibouti qaadatay khaladkaas iyo inay bixiso magta askarigaas reer Somaliland.
Wasiirka kalluumaysiga Somaliland Cali Faarax Buureed, ayaa isna sheegay in markabka laga lahaa dalka Masar oo ay dawladda Somaliland liisan siisay uu biyaha Djibouti galay isagoo raadinaya kalluun, waxaanu soo xigtay warbixin ay dawladda Djibouti ku cadaysay in markabku biyahooda u talaabay.
Wasiirka kalluumaysiga Djibouti Maxamed Cawaale, ayaa isna qiray inay ciidamada Djibouti u talaabeen biyaha Somaliland iyagoo eryanaya markabkaas Masriga ah oo uu sheegay inuu biyahooda u soo talaabay.
Wuxuu kaloo sheegay in markabkaasi aanu ahayn mid budhcad badeed sida Telefishanka Djibouti laga sheegay balse uu yahay markab ay Somaliland liisan siisay, waxaanu sheegay in hadda wixii ka dambeeya la samayn doono qalab saamaxaya in la wada xidhiidho si aanay mar dambe ciidamadu isugu dhicin.
Geesta kale, waxa iyaguna jira laba askari oo ka kala dhaawacmay Somaliland iyo Djibouti, kuwaas oo dhaawacooda lagu sheegay mid fudu